BAOLINA KITRA – AFRIKANINA :: Ho fantatra anio ny ho avin’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport • AoRaha
BAOLINA KITRA – AFRIKANINA Ho fantatra anio ny ho avin’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport
Handingana ny sakana voalohany eo amin’ny fifaninanana Afrikanina ny ekipan’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport, solontena malagasy amin’ity taom-pilalaovana ity. Hotanterahina anio ireo lalao miverina ho an’ireto ekipa roa ireto ka any Zimbaboe no hanafika ny tompondakan’i Madagasikara, raha any Guinée Equatoriale kosa no hiady ny Elgeco Plus.
Anio amin’ny 4 ora hariva (amin’ny 6 ora eto Madagasikara) no hiakatra ny kianjan’ny Estadio de Malabo ny ekipan’ny Elgeco Plus, tompon’ny amboaran’i Madagasikara. Manana tombony tamin’ny fandresena tamin’ny isa 3 noho 1, nandritra ny lalao mandroso, ny ekipan’i Robson Hubert na i Bob, mpanazatra ny Elgeco Plus. “Fandresena no tanjonay amin’ity dia ity. Salama avokoa ireo mpilalao ary isan’ny antony nandehananay nialoha ny mba tsy handreraka ireo mpilalao. Ny ampitson’io lalao io (ndlr: alakamisy) no hitodi-doha izahay ary mino aho fa fandresena no hoentina mody”, hoy i Robson Hubert.
Mila mitady fandresena kosa ny Cnaps Sport Itasy amin’ny lalaon’izy ireo sy ny FC Platinium avy any Zimbaboe ao amin’ny kianjan’ny Zvishavane, any Mandawa, 250 km miala an’i Hararé. “Nahafaty baolina izy ireo taty amintsika. Nahoana no tsy hahafaty ihany koa isika any amin’izy ireo? Azo atao tsara ny mitady fandresena hiakarana eo amin’ny dingana manaraka”, hoy i Patrick Randriambololona na i Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport.
ATLETISMA – FIOFANANA :: Tafaverina any amin’ny ivon- toeran’i Maorisy i Todisoa Franck